Ampidino CCleaner ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (34.50 MB)
CCleaner dia programa fanatsarana sy fiarovana rafitra mahomby izay mahavita manadio PC, manafaingana ny solosaina, manala ny programa, manafoana ny fisie, manadio ny rezistra, manafoana maharitra ary maro hafa.
Ny mpampiasa Windows PC dia omena kinova roa, CCleaner Free (Free) ary CCleaner Professional (Pro). Ny kinova CCleaner Professional, izay mitaky lakile, dia misy ny fiasa toy ny fitsapana ny fahasalamana PC, fanavaozana ny programa, fanafainganana PC, fiarovana manokana, fanaraha-maso aminny fotoana tena izy, fanadiovana voalahatra, fanavaozana mandeha ho azy ary fanampiana. Azonao atao ny manandrana ny kinova CCleaner Pro maimaimpoana mandritra ny 30 andro. Ny kinova CCleaner Free, etsy ankilany, dia manolotra endrika fiarovana sy fiarovana ny tsiambaratelo haingana kokoa ary maimaimpoana mandritra ny fiainana.
Ahoana ny fametrahana CCleaner?
CCleaner dia manintona ny saina ho toy ny programa fikolokoloana sy fanatsarana rafitra maimaimpoana novolavolaina ho anireo mpampiasa izay te hampiasa ny solosainizy ireo aminny zava-bitany taminny andro voalohany. Ho fanampinizany, ireo mpampiasa Windows dia mampiasa ity programa antsoina hoe CCleaner ity ho fitaovana fanadiovana solosaina.
Miaraka aminny fanampianny CCleaner, azonao atao ny mampiorina tsara kokoa ny rafitrao ary manatanteraka avo lenta aminny famafana ireo rakitra tsy ilaina aminny solosainao na fanamboarana lesoka ao aminny rejistra. CCleaner, izay iray aminireo rindrambaiko be mpitia indrindra eranizao tontolo izao aminny fanadiovana ny rafitra, dia misy ny fitaovana fototra ilaina indrindra aminny fanafainganana ny solosaina.
CCleaner, izay manana mpizara mpampiasa tena mazava sy tsotra, dia nomanina hampiasainny mpampiasa solosaina aminny ambaratonga rehetra. Miaraka aminny programa, izay manana ny menus Cleaner, Registry, Tools ary ny setting aminny menio lehibe indrindra dia azonao atao ny manatanteraka ny hetsika rehetra tadiavinao aminny alàlanny kiheba tianao hampiasaina.
Ahoana ny fampiasana CCleaner?
Ny fizarana CCleaner, aminny ankapobeny, dia mamaritra ny atiny ao aminny solosainao izay manana toerana disk tsy ilaina ho anao, manadio ny solo-sainao aminny tsindry iray monja ary mamela anao hamorona toerana fitahirizana fanampiny. Aminizany fomba izany dia tsy vitanny mahazo toerana fitahirizana fanampiny ianao, fa mampitombo ihany koa ny fahombiazanny solosainao.
Miaraka aminny programa, ny lesoka izay hita eo ambaninny rezistra ataonny solosainao sy mampihena ny fahombiazanny rafitrao dia nojerena ambaninny fizarana fisoratana anarana. Ny lesoka fisie DLL, ny olanny ActiveX sy ny Class, ny fanitarana rakitra tsy ampiasaina, ny installer, ny fisie fanampiana ary ny atiny hafa izay hiseho aorianny fanadinana dia diovina aminny tsindry iray, ahafahanao mampiasa ny solosainanao misy fampisehoana ambony kokoa.
Farany, eo ambaninny fizarana fitaovana; Miaraka aminny fanampianny fitaovana isan-karazany toy ny add / esory ny programa, ny application startup, ny mpikaroka rakitra, ny famerenana aminny laoniny ny rafitra ary ny fanadiovana fiara, azonao atao ny mampitombo ny hafainganam-pandehanny bootanao, manala ireo programa tsy ilaina na tsy ampiasaina aminny solosainao, ary mifehy ny famerenana aminny laoniny ny rafitra.
Iray aminireo fitakiana lehibe indrindra anny CCleaner ho anireo mpampiasa Tiorka dia tsy isalasalana fa ny fanohanany aminny fiteny Tiorka. Aminizany fomba izany dia azonao atao ny mamita mora foana ny asa rehetra tianao hatao miaraka aminny fanampianny programa ary afaka manaraka mora foana izay ataonao aminny dingana rehetra ianao.
Ho famaranana, raha te hanafainganana ny solosainao ianao ary mampiasa ny solosainao hatrany aminny fampisehoana andro voalohany dia ity programa ity no tena ilainao.
Fampiasana maimaimpoana sy tsy misy fetra.
Fitaovana fanadiovana rafitra azo antoka azo antoka nandritra ny taona maro.
Nanatsara ny fahaizanny scanning tsy tapaka.
Ny tsy fahampianny fanohanana fanadiovana ho anny programa mahazatra efa mahazatra.
Haben'ny rakitra: 34.50 MB